Corning VIP က ဘယ်လိုအခြေအနေမှာကွဲတတ်လဲ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ မကွဲတတ်ဘူးလဲဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် လက်တွေ့နဲ့ စမ်းသပ်ပေးထားပါတယ်။
BARMASO branded မှန်မကွဲသမျှက မကွဲတတ်တာမဟုတ်ပါ။ အကြမ်းခံတာ မခံတာက ဘရိုတို့ပဲ video ကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ ဘာလိုလည်းဆိုတော့ မှန်မကွဲတွေက ဘယ်လောက်ပဲ မာတယ်လို့ ကြောငြာပါစေ ပြုတ်ကျတာ ထိမိခိုက်မိတာ ဖိမိတာ အခန့်မသင့်ရင် ကွဲတတ်ပါတယ်။
Corning VIP က အရမ်းအိစက် ချောမွေ့တယ်လို့ထင်ပြီးဝယ်ရင် မှန်ပါတယ်။ မမှားပါဘူး။ Corning VIP က BARMASO brand သက်တမ်းမှာ အချောမွေ့ဆုံး မှန် ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့လွယ်ပါတယ်။ အမြဲလည်း ပြောင်ချောနေလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေအတွက် ဖုန်းပြောပြီးတိုင်း ဖုန်းမှာ ကပ်ကျန်ခဲ့တဲ့ make-up ကို အလွယ်တကူနဲ့ ဖျက်လို့ရပါတယ်။ (Make-up ရဲ့ ဆွဲအားပေါ်တော့မူတည်ပါတယ်။)
BARMASO မှန်မကွဲတွေက မကွဲတတ်ဘူးလို့ထင်ပြီး ဝယ်ကပ်လိုက်တာနဲ့ စမှားနေလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီလိုအနေနဲ့ဆိုရင် BARMASO brand image အတွက်လည်း ပျက်တဲ့ risk မြင့်မားနိုင်သလို ဘရိုတို့ user အနေနဲ့လည်း သုံးနေရင်းနဲ့ ကွဲသွားရင် လိမ်ခံရတယ်လို့ ခံစားမိနိုင်ပါတယ်။
မှန်မကွဲတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေမှာကွဲတတ်လဲ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ မကွဲတတ်ဘူးလဲဆိုတာကို အတိအကျ သတ်မှတ်လို့ခက်ပါတယ်။
ဘရိုတို့ စစ်တို့ သုံးနေတဲ့ cover ၊ ပြုတ်ကျတဲ့ပုံစံ၊ ပြုတ်ကျတဲ့ အမြင့်၊ ပြုတ်ကျတဲ့အရှိန်၊ ကျမ်းခင်းရဲ့အမာအပျော့အဆင့် စသည်ဖြင့်အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး ကပ်တဲ့နည်းမသင့်ရင်လည်း ဘေးထောင့်တွေ ကွဲလွယ်စေတယ်။
"ခင်ဗျာတို့ မှန်က ၁ ပေအမြင့်ကနေ ပါကေးပေါ်ပဲ ပြုတ်ကျတာ ကွဲသွားတယ်။ ခင်ဗျာတို့ video ထဲကလို ပြုတ်ကျတာတောင်မဟုတ်ဘူး။”
"အိတ်ထဲ ထည့်နေရင်းနဲ့ပဲ ကွဲသွားတာ ဘာမှကို မလုပ်မိဘူး။"
"ခင်ဗျာတို့ မှန်က ၂၄ နာရီတောင်မခံဘူး။" စသည်ဖြင့် မေးခွန်း/complaints တွေကို ကျွန်တော်တို့ အတိအကျအကြောင်းအရင်းကို မပြောတတ်ပါ။ ဒီ complaints တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ brand လည်း မရှိဘူး။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ မကွဲတတ်ဘူးဆိုတဲ့ အာမခံကို ပေးနိုင်တဲ့ company လည်း မရှိဘူး။ ပေးလည်း မပေးရဲဘူး။ ပေးလိုက်ရင်လည်း ပြိုင်ဘက်တွေက သူတို့ အမြဲမွေးထားတဲ့ fb accounts တွေနဲ့ အဲ့ဒီ point ကိုမူပြီး တကယ့် user အနေနဲ့ story အမျိုးမျိုး account name ပြောင်းပြီး တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။
ကွဲတယ် မကွဲဘူးဆိုတာ ခုနပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကလွဲ၍ ကံနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ အခြားလူသုံးတာ အကြိမ်ကြိမ် ထိမိခိုက်မိလည်း မကွဲဘူး။ ကိုယ့်ကျတော့ ဘာမှကို မလုပ်ရသေးပဲ လက်သဲနဲ့ နည်းနည်းလေ ဖိမိတာနဲ့ ကွဲရော။ ဒီအခြေအနေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရှိလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Customer တွေရဲ့ feedback အရဆိုရင် BARMASO မှန်မကွဲ ကိုကပ်ထားတဲ့ဘရိုတွေ ပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာ တစ်ချို့ဟာလည်းကွဲတယ်။ တချို့ဟာလည်း မကွဲဘူးဗျာ။ It really depends ပါဗျာ။ Customer တွေရဲ့ Comments ကိုဝင်ဖတ်ရန် http://facebook.com/baseusmm/posts/2697686170313470
ပြုတ်ကျဒဏ် ထိမိခိုက်မိဒဏ် လုံးဝလုံး၀ မရှိပဲ အကြောင်းလိုက်ကြီးအပ်နေတဲ့မှန်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ error မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို error မှန်က ဘယ် brand မဆို မှန်အချပ်အရေအတွက် ၁၀၀၀ ထဲမှာဆိုရင် ၅ ချပ်ထိရှိနိုင်တယ်။ CORNING မှာ ဒီလိုမှန် ကြုံခဲ့ရင် ဘောင်ချာနဲ့ ပြန်လာပေးပါ။ အသစ် တစ်ချပ် အခမဲ့ ပြန်လဲပေးပါတယ်။ ဘောင်ချာမရှိရင် ပြန်လုပ်ပေးလို့ မရပါခင်ဗျာ။
ကျန်တဲ့စကားကို တည့်ပဲ ပြောပြပါရစေ။ ပြောနေရတာ အားမရလို့......
မှန်ကပ်ကို ခနခနလည်းနိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုရင် ပွတ်နေတဲ့အချိန်မှာ အိစက် ချောမွေ့ပြီး အရမ်းကိုလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Corning VIP 15000 တန်ကိုရွေးပါ။ တစ်ခါကပ်ပြီး ကံဆိုးသွားလို့ complaints ကို fb group မှာ တောက်လျှောက် သွား share တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးဒဏ်ကို ကျွန်တော်တို့ မခံနိုင်ဘူးလို့ ကြိုတင် ဝင်ခံပါရစေ။
ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံကို မှန်ကပ်မှာပဲ မကုန်ချင်ဘူးဆိုရင် ၈၀၀၀ တန် 10H Glass ကို ကပ်ပါ။ အဲ့ကောင်လည်း display 100% အပြည့်၊ 3D အကွေး ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလည်း ကောင်းတယ်။ ချောမွေ့မှု နှင့် ဘေးဘောင်ခံနိုင်တဲ့ kilogram weight ပဲ Corning VIP လောက်မရှိတာ။ ကျန်တာအားလုံးကောင်းပါတယ်။
BARMASO မှန်တွေက အဲ့လောက်မတန်ဘူး။ မြေနီကုန်းမှာ ၅၀၀ တန် ၁၀၀၀ တန်လိုပါပဲ။ အဲ့မှာပဲ သွားကပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မတူတဲ့အမြင်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း လူတိုင်းရဲ့ အမြင်ကို ကျွန်တော်တို့အတွေးနဲ့ လာတူညီအောင်လို့ မဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ပြုတ်ကျတာလဲမကွဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်လုပ်မကွဲဘူးဆိုတဲ့ မှန်သား Screen Guard ကို ရှာနေတဲ့သူများကို "GLASS IS GLASS. GLASS BREAKS." ——— JerryRigEverything ဆိုတဲ့စကားလေးကို မှတ်ထားပေးပါလို့ ပြောရင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသက်လိုက်ပါရစေ။
#droptest #corningvip #barmasocorningglass #clarification
Back to Just SharingUV မှန်ကပ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမျာ